ကြေညာချက်များ – Page 8 – Ministry of Hotels & Tourism Myanmar
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့်စီးပွားရေးသက်ရောက်မှုများအပေါ်ကုစားရေးလုပ်ငန်းကော်မတီသတင်းထုတ်ပြန်ချက်(၂/၂၀၂၀)
၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ဧပြီလ ၂၈ရက် ၁။ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့်စီးပွားရေးသက်ရောက်မှုများအပေါ်ကုစားရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ အစည်းအဝေး (၃/၂၀၂၀) ဆုံးဖြတ်ချက် အရ ချေးငွေလျှောက်ထားသည့် လုပ်ငန်းများအနက် ပထမအသုတ်အဖြစ် လုပ်ငန်း (၈၈) ခုကိုချေးငွေထုတ်ယူခွင့်ပြုခဲ့ရာအဆိုပါလုပ်ငန်းများအနက်မှ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်၏ စိစစ်ချက်အရချေးငွေထုတ်ပေးရန်...
Announcements, News & Announcements, Tourism News
နေပြည်တော်၊ ဧပြီလ (၂၁) ရက် ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကြားမှုဉီးစီးဌာနမှ နိုင်ငံပိုင် ဟိုတယ်များအား ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များသို့ ငှားရမ်းထားရှိရာ ယနေ့အချိန်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ အပါအဝင် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံပေါင်းများစွာ၌ COVID-19 Virus ရောဂါကူးစက်မှု ကျယ်ပြန့်များပြား လာခြင်း ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံရှိဟိုတယ်များတွင်...
Announcements, Tourism News
နေပြည်တော်၊ ဧပြီလ ၁၅ ရက် ၁။ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားကဏ္ဍ ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ခရီးသွားများဘေးကင်းလုံခြုံအဆင်ပြေစွာ အပန်းဖြေအနားယူနိုင် ရန် ရည်ရွယ်ချက်ထား ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ၂။ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ မြန်မာနိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်းဥပဒေ (၂၀၁၈) နှင့်အညီ တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်များတွင်...
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် စီးပွားရေးအကျိုးသက်ရောက်မှုများအပေါ် ကုစားရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်
The post of Executive Director,International Trade Center (ITC)
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ဇန်နဝါရီလမှ စတင်၍ လစ်လပ်လျက်ရှိသော International Trade Centre(ITC) ၏ အမှုဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးနေရာအတွက် ကုလသမဂ္ဂ ကုန်သွယ်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ညီလာခံ (United Nations Conference On Trade and Development-UNCTAD)...
SWISS CHALLENGE တင်ဒါအဆိုပြုလွှာဖိတ်ခေါ်ခြင်း
SWISS CHALLENGE တင်ဒါအဆိုပြုလွှာဖိတ်ခေါ်ခြင်း ၁။ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနပိုင် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၊ ချမ်းအေး သာစံမြို့နယ်၊ ပြည်ကြီးမျက်မှန်ရပ်ကွက်၊ ၂၇လမ်းနှင့် ၆၈လမ်းထောင့်ရှိ မြမန္တလာဟိုတယ် (ယခင်ထွန်းလှဟိုတယ်)ကို တာမိုးညဲချမ်းသာ ကုမ္ပဏီများ အုပ်စုက၂၀နှစ်ငှားရမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ ယခုအခါငှားရမ်း ကာလသက်တမ်းကုန်ဆုံးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီက...
တရုတ်ဘာသာအထူးပြု ဒေသဆိုင်ရာဧည့်လမ်းညွှန်သင်တန်း(မန္တလေး) သင်တန်းဝင်ခွင့်ဆိုင်ရာကြေငြာချက်
ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန တရုတ်ဘာသာအထူးပြု ဒေသဆိုင်ရာဧည့်လမ်းညွှန်သင်တန်း(မန္တလေး) သင်တန်းဝင်ခွင့်ဆိုင်ရာကြေငြာချက် ၁။ တရုတ်ဘာသာအထူးပြု ဒေသဆိုင်ရာဧည့်လမ်းညွှန်များမွေးထုတ်ရန်ရည်ရွယ်၍ ဟိုတယ် နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၏ ကြီးကြပ်စီစဉ်မှုဖြင့် တရုတ်ဘာသာအထူးပြု ဒေသဆိုင်ရာဧည့်လမ်းညွှန်အခြေခံသင်တန်းကို မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မန္တလေးမြို့တွင် ၁၀-၃-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှ ၃-၄-၂၀၂၀ ရက်နေ့အထိ...
B.A (Tourism) ဘွဲ့ရပြင်ပပုဂ္ဂိုလ် (၂၀)ဦးတို့အား အကြီးတန်းစာရေးရာထူးအဆင့်တွင် အမြဲတမ်းဝန်ထမ်းအဖြစ် စတင်ခန့်ထားခြင်း အောက်ပါ B.A (Tourism) ဘွဲ့ရပြင်ပပုဂ္ဂိုလ် (၂၀)ဦးတို့အားအကြီးတန်းစာရေး(လစာနှုန်း ၁၉၈၀၀ဝိ -၂၀၀ဝိ – ၂၀၈၀၀ဝိ) ရာထူးအဆင့်တွင် ၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ မတ်လ(၃)ရက်နေ့၊ နံနက်ပိုင်းမှစ၍...
၁။ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနအတွက် လိုအပ်လျက်ရှိသည့် ပူးတွဲဇယားပါ ရုံးသုံးစက်ပစ္စည်းကိရိယာနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဝယ်ယူလိုပါ သဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားသည့် ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် သတ်မှတ်စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ တင်သွင်းနိုင်ရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်- ၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန် သတ်မှတ်ချက်များမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်- (က) တင်ဒါပုံစံစတင်ထုတ်ပေးမည့်ရက် –...